Labo nin oo maxbuus ahaa oo si layaab leh uga baxsaday Xabsi ku yaal New York +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Labo nin oo maxbuus ahaa oo si layaab leh uga baxsaday Xabsi ku yaal New York +Sawirro
Labo nin oo maxbuus ahaa ayaa si layaab leh uga baxsaday xabsi ammaankiisa aad loo ilaaliyo oo ku yaal magaalada New York ee dalka Mareykanka.
Richard Matt oo 48 jir ah iyo David Sweat ayaa ahaa labo nin oo dambiile ahaa, kuwaasoo lagu kala xukumay 25 sano iyo xabsi daa’in, waxaana xabsiga ay ka baxsadeen habeenkii jimcaha.
Baadigoob xoogan ayaa ka socda magaalada New York, kaasoo lagu raadinayo labada nin ee xabsiga ka soo baxsaday, waxaana Duqa magaalada New York uu madaxooda dul dhigay $ 100,000 oo doolar abaal marin ah, cidii keenta macluumaad lagu soo qaban qaro.
“Dambiilayaashan waa kuwo khatar ah oo awood u leh inay galaan dambiyo”ayuu yiri Duqa magaalada New York Andrew Coumo.
Duqa magaalada New York ayaa soo dhigat bartiisa Twitter-ka sawirada Tubooyinka iyo darbiyada ay jebiyeen raggan oo muujinaya wadadii ay u mareen baxsashadeen.
Labada maxbuus ayaa xabsiga ka baxsaday, iyagoo jebiyay darbiga qolkii ay xabsiga ku jireen, iyagoo sii duleeliyay dhuun ay marto Fiilada Korontada, taas ayaana la aaminsan yahay in baxsashadooda ay u sahashay.
Mr Matt ayaa lagu xukumay 25 sano oo xarig ah, markii uu nin afduubtay, dabadeedna sidii uu u garaacay u dhintay sanadkii 1997.
Ninka kale ee lagu magacaabo David Sweat ayaa isna waxaa uu dilay Taliye kuxigeenkii ciidamada ee deegaanka Broome oo la oran jiray Kevin Tarsia, waxaana lagu xukumay xabsi daa’in.
Booliska ayaa isku dayaya sidii ay raggan u soo qaban lahaayeen, waxaana ka qeyb qaadanaya howl galka illaa 200 askari, oo isticmaalaha eeyaha wax uriya iyo la socoshada qalab anteenooyin lagu ogaanayo halka ay joogaan
Waxaa la sheegayaa inay raggan u gudbeen Canada ama Gobol kale, waxaana Booliska uu sheegay in qof saddexaad uu gacan ku siiyay labadan nin inay xabsiga ka baxsadaan.
Waa markii u horeysay ee xabsigaas ay ka baxsadaan maxaabiis muddo 150 sano inta la xusuusto taariikhda, sida ay qoreen warbaahinta dalka Mareykanka.